Into ebalulekileyo yokuphuhliswa komntu ngamnye kukuba ukwaneliseka kweso sidingo sokuba adibana nabazalwana abasondeleyo kuye, ikakhulukazi nabazali bakhe. Olu othungelwano luya kunceda ukubuyisela iiholide, ngokukodwa ieholide zentsapho kwi-nursergarten.
Kutheni iholide zentsapho ensimini?
Umbutho weeholide zentsapho kwi-nursergart enye yeendlela zokunxibelelana phakathi kwabantwana, abazali nabafundisi. Iholide ezinjalo zijoliswe ekujonganeni neengxaki ezahlukeneyo. Olu phuhliso kubantu abadala ukukwazi ukwahlula phakathi kwamazwe angamavakalelo, ukuququzelela ukunxibelelana phakathi kwabantwana nabantu abadala. Ukufumana amava ngabazali ngeeholide zeentsapho, ngokuqwalasela iingcebiso zeengcali kunye nootitshala.
Inyaniso kukuba iziganeko ezinjalo zivumela abazali ukuba bafumane ulwazi oluthile. Umzekelo, ukujonga phakathi kweengxaki ezahlukeneyo zomntwana, ubunzima bakhe ebuhlotsheni. Ieholide zentsapho kwi-kindergarten uncedo lwabazali bafumana ulwazi lokunxibelelana kungekuphela kwintsana yabo, kodwa ngokubanzi kunye noluntu lwabazali. Iholide ezinjalo zinceda ukusondela kubo bonke abenza inxaxheba kubo, kwaye oku kubaluleke kakhulu kwiintlalontle ezizayo.
Kwinkqubo yokulungiselela ngokubambisana neeholide enkulisa, abazali banempawu ezininzi. Umzekelo, umsebenzi, ubumbano, ubuqili, uxanduva, umculo. Abantwana ngeli xesha babe nobuciko, bekhululekile kwaye banxibelelana, kuba bahlonipha inkxaso yootitshala kunye nabazali babo. Ukongezelela, abazali basondelene nabantwana kunye nabanye. Indlela yokusebenzisana phakathi kootitshala, abazali kunye nabantwana bafanelekileyo kwaye bafike ngexesha elifanelekileyo kwiziko lemfundo kwi-kindergarten.
Ziziphi iholide zeentsapho ezinokubanjelwa kwi-kindergarten
Iholide - kukuhlala kukubhiyozela, uvuyo, ukuzonwabisa, okuba abadala kunye nabantwana bafumana. Xa ulungiselela nayiphi na iholide yentsapho, abazali nabafundisi bacinga kunye kunye nokwenza izambatho, imihlobiso, ukulungiselela ukuphatha, njl. Ieholide zentsapho zingafani kakhulu. Lawa "ngoMatshi 8", "I-Autumn Fair", "iNttune Day", "Uhambo olutsha lweNtsundu". Kwakhona, "i-Kolobok ehlathini lekwindla", "Iholide yezemidlalo", "Uhambo oluya kwiziqithi zesikolo", umjikelezo weemeko zexesha elihlukeneyo, "Ukuvakasha kwindlovukazi", njl njl.
Kukho inketho ezininzi kwiintsapho zeentsapho zeeholide ensimini. Inomdla ingaba yimeko apho abantwana nabazali batshintsha khona indawo. Ngamanye amazwi, abantu abadala baya kuba ngabantwana abafuna ukufundiswa, okumele bahlale bebukele, kwaye ngamanye amaxesha bahlwaywe.
Ngeli holide yentsapho ensimini kufuneka udlulise indima phakathi kwabantwana. Umzekelo, abantwana ababini (intombazana kunye nentombazana) kufuneka badlale indima yabazali abazama ukufundisa abantwana babo konke okulungileyo kunye okulungileyo. Ngenxa yale njongo banethuba lokufaka izicelo kwiingcali ezahlukahlukeneyo ngoncedo, kwindima eyenziwa ngabanye abantwana. Laba bacebisi kweholide leentsapho kufuneka babe oogqirha, ootitshala, abameli bezakhono ezihlukeneyo zokusebenza kunye nabadlali, abadlali.
Abantwana ootitshala kufuneka baxelele abazali-abantwana ukuba babe ngumntu olungileyo kwaye baphumelele kwixesha elizayo, umntu kufuneka afunde ngokunyanisekileyo, alalele asebekhulile, agcine ucoceko, njalonjalo. Ngokomzekelo, oogqirha banokwenza ukuba bafumane ubuthongo obuhle, izambatho ezifudumele ebusika, ukuthobela ulawulo lwaloo mini, njl njll. Abadlali banokuthi batheni ukuba kunceda ukuthatha inxaxheba kwimfundo engokwenyama, ukutya okunempilo kunye nokutya okunjalo, njl. Imeko yale matine ingaba nemifanekiso eninzi njengabafundisi kujonge ukuba kuyimfuneko. Ngaloo ndlela, abantwana baya kuqalisa ukuqonda ukubaluleka kwezo mithetho kunye neemfundiso abazinikela zona kubazali babo kwintsapho yomama kwaye baya kuzama nzima ukuzigcina. Ukuphuhliswa kwabantwana kuququzelelwa nayiphi na indima yomdlalo, ngoko nayiphi na i-matinee, kungakhathaliseki ukuba yintoni umxholo owathunyelwe kuyo, iya kubazuzisa abantwana kuphela. Kunyanzelekile ukuba nawuphi na umasane ukuphumelela iintlawulo ezahlukahlukeneyo, oku kuya kuqinisa kuphela umdla wabantwana. Ewe, ukuba iholide yentsapho edibaneni ihamba kunye netafile entle. Abazali kwiintsana ngabantu abasondeleyo. Kwaye zonke iifana zifuna ukuzibonisa iimpumelelo zabo. Oku kubangela ukuba abantwana baziqhenye kwaye bazimeleyo.
Ukulungiswa kwezixhobo zokuqala esikolweni
Indlela yokukhetha isikhungo sokunakekela abantwana esifanele umntwana wakho
Ukubalwa kwesidlo somtshato
Ukunciphisa ubuncwane: uMaria we-Stern jewelry collections
Izakhiwo ezisisiseko zeempahla zengubo
Merengi iintliziyo ezineziqhamo zokuzalisa
Ukupheka kwezidlo zaseNtaliyane zonyaka omtsha
"Rusfond" inenjongo yokumangalela ngezihlobo zikaZhanna Friske